That's so good, right?: April 2015
တကယ့်ကို ပြီးပြည့်စုံတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ပါပဲဗျာ။ နေမင်းကြီးကလည်း ရောင်ဝါထိန်လင်းလို့ ကောင်ကင်းထက်မှာ ငွားငွားစွင့်စွင့်။ ကျေးငှက်သရကာလေးတွေကလည်း ကျည်ကျည်ကျာကျာ တေးဆိုနေကြတာ သူတို့ချစ်သူခင်သူတွေကို ချစ်ခွန်းသီနေကြသလား ထင်ရတယ်။ ပြတင်းပေါက်က လိုက်ကာတွေကတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းလာတဲ့ လေနုအေးတွေက နွေးတေးတေးနဲ့ဆိုတော့ အပြင်မှာ ပူများနေရော့သလား။ အင်း….ကျွန်တော် မျက်လုံးတွေကိုဖွင့် အလင်းဝင်လာတာကိုမျက်ကွယ်ပြုထားစေတဲ့ မျက်နှာပေါ်က ခေါင်းအုံး ကိုဖယ်လိုက်တယ်။ အမှန်တော့ အိပ်မက်တိုင်းပြည်ကို ပြန်သွားချင်နေတာ။ ဒါပေမဲ့ နေ့အလင်းရောင်က စရောက်နေပြီလေ။ ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း အိပ်တာလုံလောက်နေပြီလို့ပြောနေပြီဗျ။ အားလုံးထက် ထင်ရှားနေတာတစ်ခုကိုလည်း တွေ့လိုက်ရတယ် ခပ်ပါးပါး စောင်ခြုံထားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းဝယ် ဖောက်ထွက်မတတ် ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေတဲ့ အရာကိုပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် အိပ်ရာပေါ်မှာဆက်ပြီးလှဲနေမိပါတယ်။ နေဖင်ထိုးမှထတယ်ဆိုတဲ့ လူကြီးတဲ့ပြောတဲ့စကားကို အခုပြည့်ပြည့်၀၀ ထောက်ခံနေမိပါရဲ့။ လုပ်စရာအလုပ်တွေလည်းပြီး ထပ်မံလုပ်ဖို့အလုပ်တွေကလည်း သိပ်မရှိသေးတော့ ကျွန်တော့်မနက်ခင်းလေးက နုပျိုနေစဲပါ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲက ဆင်ခြေပေါင်းစုံပေးနေမိပါတယ် အိပ်ယာပေါ်ကထဖို့ကိစ္စလေးကို။ ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ညီငယ် လေးကတော့ မအိပ်ချင်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်။ တစ်ချိန်လုံးလိုလို သူ့ကိုလှစ်လျူရှုထားတာကြာပြီဆိုတော့ စိတ်ကောက်မှာလဲစိုးရသေး။
နံဘေးကိုချထားတဲ့ လက်ကလေးကို ဗိုက်သားလေးတွေကနေတစ်ဆင့် ဆီးစပ်တလျောက် လက်ကိုလျောဝင်လိုက်စဉ်မတော့ ခုတင်ဘေးက ဆဲလ်ဖုန်းက ဆူဆူညံညံထမြည်ခဲ့ပါတယ်။ ‘ကျွတ်….ဒီဖုန်းကို အိပ်ရာနားငါဘာကြောင့်ထားမိမှန်းကိုမသိဘူး’ လို့ ခပ်တိုးတိုး ရေရွတ်မိရော။ အောက်ကိုတွားသွားနေတဲ့လက်ကို ရုတ်သိမ်းပြီး ဆဲလ်ဖုန်းစီကိုလက်လှမ်းလိုက်ပါတယ်။ နောက်ကျသွားတယ် နဲ့တူတယ် ဖုန်းမြည်သံရပ်သွားသဗျ။
‘ကောင်းတယ်၊ ငါပြန်အိပ်လို့ရပြီ အခု’ ဒါပေမဲ့ တတိတိနဲ့ မြည်သံလေးတွေအဆက်မပြတ်မြည်လာပြန်တာကြောင့် ခုတင်ဘေးတစ်ဘက် ကိုပြန်လှိမ့်လိုက်ကာ ဖုန်းကိုယူလိုက်ပါတယ်။ မက်ဆေ့စ်တစ်စောင် အသစ်ရောက်နေကြောင့် ဖုန်းမျက်နှာပြင်မှာတွေ့ရပါ့။ ဖုန်းကိုဖွင့်ပြီး အသံမက်ဆေ့စ်ကို နားထောင်လိုက်တယ်။ ဒီဖုန်းနံပါတ်ကို ကျွန်တော်မမှတ်မိဘူးဗျ။ အလုပ်က တစ်ယောက်ယောက်ပဲဖြစ်မှာပါ အလုပ် ကို ခပ်စောစောလာဖို့ ဒါမှမဟုတ် ညနေပိုင်းတက်နေတဲ့သင်တန်းကတစ်ယောက်ယောက်က ခေါ်တာဖြစ်မလားဘဲ။ ဘာကြောင့်လဲမသိ ကျွန်တော် ဂဏန်းနံပါတ်တွေကို အလွတ်မှတ်သားထားဖို့အတော်ပျင်းပါတယ်။ အရင်သိပြီးသားလူဖြစ်မလား ဘာညာကြည့်လိုက်သေး တယ်။
ခဏနေတော့ သူ့အသံကိုကြားရပါတယ်။ ပထမတော့ အသံလုံးဝမကျက်မိပါဘူး။ သူ့နာမည်ကဘယ်သူပါလိမ့်? သူကတော့ပြောပါတယ် နွေရာသီ ခရီးထွက်တုန်းကအတူသွားခဲ့တဲ့တစ်ယောက်ပါတဲ့။ ဒီနေ့ ကျွန်တော်အားရင် စက်ဘီးအတူထွက်စီးရအောင် ဒါမှမဟုတ် ဒီတစ်ပတ်ထဲ ကျွန်တော်အဆင်ပြေမယ့် ရက်တစ်ရက်ပေါ့ဗျာ။ သူ့မှာစက်ဘီးတစ်စင်းရှိတယ်တဲ့ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်စက်ဘီးကို မကြာခဏစီးနေတာသူသိသတဲ့လေ။ ကောင်းပြီလေ၊ ကျွန်တော် နေ့တိုင်းလိုလို စက်ဘီးစီးဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်အပြင်ထွက် စီးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်းဗျားနာမည်က?
သူဘယ်တော့မှသူ့နာမည်ကိုမပေးဘူး ဖုန်းနံပါတ်ကလွဲလို့ပေါ့။ ဒီနေ့ တစ်ချိန်ချိန်တော့ သူ့ကို ကျွန်တော်ခေါ်နိုင်တာပဲလေ။
မင်းလေးနဲ့အတူတူ အပြင်ကိုထွက်လည်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မင်းလေးဘယ်သူဆိုတာ မမှတ်မိပါလား။ အသံချိုချိုလေးကိုတော့ အမှတ်ရ သလိုရှိသား။ မင်း….မင်းနာမည်လေးကို လျှာဖျားမှာတင်တစ်နေတာ။ ငါ့ပေါင်ကြားက ညီဘွားကတော့ မှတ်မိတယ်ထင်ပါရဲ့ ခေါင်းတ ထောင်ထောင်နဲ့လေ။
အာ…ဟုတ်ပြီ ကျွန်တော်သတိရပြီ။ သူ့နာမည်က ဥက္ကာ…ဥက္ကဇော်။ အသက်ကတော့ ကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တူပါပဲ လအနည်းငယ်လောက် တော့ကြီးလိမ့်မယ်။ ဘုရားသခင်…..ဒါ နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီပဲ သူ့ကိုနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ချိန်ကစရေတွက်လိုက်ရင်။ သူက ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး တော်တော်လှတယ်လို့ပြောရမယ့်လူပဲ။ သူ့အင်္ကျီချွတ်လိုက်ချိန် သတိမပြုဘဲမနေနိုင်ဖြစ်စေတာက ဗိုက်ကြွက်သားတွေဗျ အံစာတုံးတွေစီထားတဲ့အတိုင်း။ သူ့ရင်အုပ်ကြွက်သား၊ abs …ပေါင်ကြားက ခပ်ပျော့ပျော့ အရည်ပြားကအစ အရမ်းမိုက်။ သူ့နို့သီးခေါင်း လေးတွေက အညိုရောင်သမ်းနေပြီး ရင်အုပ်ကနေ ဆီးစပ်အထိ အမွှေးနုနုလေးတွေက သွယ်တန်းနေရော။ ဥက္ကာပြုံးလိုက်တဲ့အခါတိုင်း သူ့မျက်နှာပိုမိုနုပျိုသွားသယောင်ခံစားရတယ်။ သူ့မျက်ဝန်းတွေက ကြည်ပြာရီဝေသောမျက်ဝန်းတွေလို့ဆိုရမလား။ သူ့နှာတံတွေက တခြားသူတွေလိုပွယောင်းယောင်းမဟုတ်ဘဲ တကယ့်ကိုပုံသွင်းထားတဲ့အတူ အချိုးကျပါရဲ့။ မျက်နှာဝယ် မျက်ခုံးမွှေးကလွဲလို့ ဘာအမွှေး အမျှင်မှမရှိပါဘူး။ ဆံပင်တွေကလည်း ပုံစံကျသပ်ရပ်လို့ ကြည့်လိုက်ရင် သပ်ရပ်သန့်ရှင်းအချိုးကျနေတော့တာပါ။
ကျွန်တော်သူ့ကိုစိတ်ကူးထဲမှာတွေ့ကြည့်ရင်း လက်ငါးချောင်းကော်မတီခဏခဏခေါ်ရတာ မရေတွက်နိုင်တော့ပါဘူး။ သူ့ကို တို့ထိချင် တယ်၊ တကယ့်ကို ကိုင်တွယ်ကြည့်ချင်တယ်၊ ကျစ်လစ်တောင့်တင်းသော သူ့ကိုယ်ကြီးကို ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ပစ်ချင်တယ်၊ ပြီးတော့ သူ့ကိုယ်လုံးကိုဖက်တွယ်ကာ အတူယှဉ်တွဲအိပ်စက်ကြည့်ချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့အဖြစ်က လက်လေးဆွဲကိုင်နှုတ်ဆက်ရုံ၊ ပွေ့ဖက်နှစ်သိမ့်ရုံလောက်သာရှိခဲ့ကြတာ။ ဥက္ကာကို ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ လျှို့ဝှက်ဖြစ်ပေါ်နေသောစိတ်ကိုဖွင့်ပြောရမှာ တော်တော် ကြောက်လန့်ပါတယ်။ သူနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတစ်ရပ်ဆုံးရှုံးသွားရမှာကို မစွန့်စားကြည့်ချင်ဘူး။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော့် လိင်စိတ် တိမ်းညွှတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ဥက္ကာ နောက်တွန့်သွားကာ ခွဲခွာရမယ့်အဖြစ်ကို စိုးရိမ်နေခဲ့တာ။
ဒါပေမဲ့ တတ်နိုင်သမျှတော့ ဘ၀တစ်ခုရဲ့ရပ်တည်မှုတစ်ခု (Identity) ကို တတ်နိုင်သမျှဖုံးကွယ်ထားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဥက္ကာအနေနဲ့ တော့ တစ်ခုခုကိုသေချာပေါက်သံသယတော့ဝင်ခဲ့မှာပါပဲ။ နွေရာသီရဲ့ အပူရှိန်ထဲ တထိန်ထိန်ဖြစ်နေတဲ့ သူ့အလှအပေါ် ကျွန်တော် ညွှတ်နူးမိတိုင်း သူကတော့ အဝေးကိုသာငေးမောနေလေရဲ့။ လေးငါးခြောက်ကြိမ်လောက် စိုက်စိုက်ကြည့်မိနေတာ တစ်ကြိမ်တော့ မိမလိုဖြစ်သွားပေမယ့် ကျွန်တော် ခပ်မြန်မြန်ဘဲ အကြည့်လွှဲလိုက်ရတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဘာမှမပြောပါဘူး။ သူက တကယ့်ကြင်နာတတ်သူဖြစ်ခဲ့တာပဲလေ….ဒါပေမဲ့ သူဘယ်လောက်ထိများ သိနေသလဲရိပ်မိနေသလဲ ကျွန်တော်သိချင်ပါဘိ။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာ ဆယ်ကျော်သက်နှစ်အတော်များများကို အတူဖြတ်သန်းခဲ့ကြတာပါပဲ။ နှစ်ယောက်စလုံး အလယ်တန်း ကော အထက်တန်းပါ အတူတက်ခဲ့ကြတာ။ နေ့လယ်စာကျောင်းဆင်းချိန်တိုင်း စားပွဲခုံတစ်ခုမှာအတူထိုင်ပြီး စားတတ်ခဲ့ကြတာ။ အား လပ်ချိန် ကျောင်းပိတ်ရက် ဒါမှမဟုတ် ညနေပိုင်း ကျောင်းအားချိန်အချို့မှာ အတူတကွ အပြင်ထွက်လည်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဥက္ကာ က ကျောင်းမှာ အားကစားအသင်းမှန်သမျှပါဝင်နေတတ်တဲ့သူဖြစ်တော့ ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိ သူ့လေ့ကျင့်ချိန်တွေနဲ့ပဲ အလုပ်ရှုပ်နေ တာများတယ် ဆိုပါတော့။
နှစ်တိုင်းလိုလို နွေရာသီအားလပ်ရက်နေ့ရက်တွေကို မျှော်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်ဆို ဥက္ကာဟာ အားကစားလှုပ်ရှားမှုတွေအကုန် ပြီးပြတ်လို့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်အားလပ်ချိန် တစ်ယောက်ဝေမျှကုန်ဆုံးလို့ရကြတာကိုး။ June လတစ်လက တော့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုတွေနဲ့အပြည့်ပဲလို့ပြောရမယ်။ ဥက္ကာနဲ့ကျွန်တော် စက်ဘီးကိုယ်စီဆွဲပြီး မိုင်အတော်များများရောက်အောင် ခြေစင်္ကြာဖြန့်ကြပါတယ်။ လမ်းကြောင်းမျိုးစုံဆွဲလို့ တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်မတူကြဘူးပေါ့။ ဥပမာပြောရရင် နေထိုင်ရာ နိုင်ငံရဲ့မိခင်မြစ်ကြီး က ကျွန်တော်တို့မြို့နံဘေးတလျောက်စီးဆင်းနေတာဆိုတော့ ကမ်းဘေးတလျောက် အတော်ဝေးဝေးကို စီးနင်းဖြစ်ကြတယ်။ မြစ်ကြီးရဲ့ တစ်ဘက်ကမ်းကတော့ မိုးအထိမြင့်မားနေသော သစ်ပင်စိမ်းစိမ်းတွေရှိရာ သစ်တောအုပ်ကြီးက ထူထပ်ပါဘိသနဲ့။
တစ်ခါတလေ ကျွန်တော်တို့ တမျှော်တခေါ် မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် စက်ဘီးဆက်မစီးဖြစ်ကြဘဲ လမ်းတစ်ဝက်တင်ရပ်လိုက်ရင်း သစ်တော အတွင်းပိုင်းရှိရာဘက်ခြမ်းကို ကူးကာ လမ်းကြောင်းသစ်ထွင်စီးနင်းဖြစ်ကြပါတယ်။ သစ်တောအလယ်ပိုင်းလောက်မှာတော့ ထင်းရှူးပင်ကြီးတွေအများအပြားပေါက်ရောက်နေတတ်ပြီး စိမ်းလန်းတဲ့သစ်ပင်တွေ သစ်ကိုင်းသစ်ခက်တွေနဲ့နွယ်ယှက်နေတာဆိုတော့ အရိပ်ကောင်းကောင်းမှာ အေးအေးဆေးဆေးအနားယူလို့ရကြပါရဲ့။ ဥက္ကာနဲ့ ကျွန်တော် လေတဖြူးဖြူးနဲ့ သစ်ရိပ်မှာအနားယူရတာကို သဘောကျကြတယ်။ တစ်ခါတလေ မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းတွေပေါ်မှာ သူနဲ့ကျွန်တော် အကျ င်္ီမ၀တ်ဘဲလှဲလျောင်းတတ်ကြသေးတယ်။ တစ်ခါ တလေကျတော့ အရိပ်ကောင်းတဲ့ သစ်ပင်အောက်မှာထိုင်ရင်း ကြေးငှက်ကလေးတွေရဲ့ တေးသံသာတွေကို နေရောင်တွေနည်းပါးသွား တဲ့အထိထိုင်ပြီးနားဆင်ဖြစ်ကြသေးတာပါ။
ဒါပေမဲ့ နွေရာသီအားလပ်ရက်ကလေးကလည်း တိုတောင်းလှပါတယ်။ မကြာခင်မှာဘဲ နွေရာသီဘောလုံးသင်တန်းစတတ်တော့ ဥက္ကာက ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိမနေနိုင်တော့ဘူး။ အဲ့လိုအချိန်တွေဆိုရင် အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်းထိုင်ပြီး အထီးကျန်မှုတွေနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ကာ စိတ် ညစ်ညူးနေရလေ့ရှိပါတယ်။အမေက အဖေ့ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်ဝင်လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုပေးပေမယ့် အသုံးမ၀င်ပါဘူး။ ကျွန်တော် ဥက္ကာကိုပဲ လိုအပ်နေခဲ့တယ်။ ဥက္ကာသာရှိရင် ကျေနပ်တယ် နေပျော်တယ်လေ။ သူလည်း ကျွန်တော့်လိုပဲ ခံစားရသလားလို သိချင်စမ်းပါဘိ။
အထက်တန်းကျောင်းစားမေးပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဥက္ကာနဲ့ ကျွန်တော် နွေရာသီအားလပ်ရက်ကို နောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြတ်သန်းခဲ့ပါသေး တယ်။ အရင်အချိန်တွေထက်တော့ နည်းနည်းကြာကြာဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့။ ဥက္ကာအတွက်က July လဟာ ဘောလုံးကစားဖို့အတွက် မရှိဘူးဆို တော့လေ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံး သြဂုတ်လကိုမုန်းပါတယ်။ မကြာခင် ကောလိပ်တက်စတက်ဖို့ခွဲခွာကြရတော့မှာမို့ပါ။ ဥက္ကာက အတော်ချီးကြူးဖို့ကောင်းတယ်…တော်တော်ကြီးတဲ့ အားကစားတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှ full paid scholarship တစ်ရပ်ကိုလက်ခံ ရရှိထားတာဆိုတော့ မဆိုးဘူး။ အခြားဘက်မှာတော့ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ဈေးသိပ်မကြီးသလို အဆင့်နိမ့်ကောလိပ်ထဲမှာမပါတဲ့ စာသင် ကောင်းတဲ့ ကောလိပ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ အတူကုန်ဆုံးနိုင်တဲ့နေ့ရက်တွေရောက်လာတော့ နှစ်ဦးသား နှုတ်ဆက်ကြ၊ တစ်ယောက် ဖုန်းနံပါတ် တစ်ယောက်လဲလှယ်ပေးကြပေါ့။ ပြီးတော့ Facebook မှာ အဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ကြဖို့ ဂတိပြုကြပါတယ်ဗျ။
ကောလိပ်ရဲ့ ပထမနေ့ရက်တွေမှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ Facebook ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုနေတာတွေနဲ့ပဲ အားလပ်ချိန်တွေကိုဖြုန်းမိတယ်။ သူတင်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို အမြဲကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ဘ၀သစ်မှာ ဘယ်လိုတွေစီးမျောနေသလဲ ဖမ်းယူကြည့်တယ်ဆိုပါတော့။ ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံမှာတော့ ဘောလုံးဒိုင်းဆုတစ်ခုကို ကိုင်မြှောက်ထားတာတွေ့ရတယ် သူတို့အသင်း National Championship နိုင်ပွဲဆင် ထားတာဖြစ်မယ်ဗျ။ သူ့ relationship status ကိုလည်း ဘယ်တော့မှ မျက်တောင်မခတ်ဘူးအမြဲကြည့်ဖြစ်ပေမယ့် single ကနေ မပြောင်းဘူးလေ။ ကျွန်တော်သိတယ် ဥက္ကာ သူ့ဘ၀သစ်မှာ နစ်ဝင်ပျော်ရွှင်နေတော့ သူ့ကိုအထိုင်ကျစေမယ့် မိန်းကလေးရည်စား မလိုချင်ခဲ့ဘူးထင်ပါတယ်။
အဲ့ ပထမနှစ်တစ်နှစ်တော့ ထိတွေ့မှုမပြတ်ဘူးပေါ့လေ ကျောင်းကိစ္စတွေနဲ့အလုပ်ရှုပ်ဖြတ်သန်းရပေမယ့် အေးဆေးဖြစ်သေးတယ်။ ဥက္ကာက သူ့အားကစားသမားဘ၀ကို တော်တော်နစ်ဝင်ပျော်ရွှင်နေခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ သုတေသနစာတမ်းတွေကိုရေးလိုက် စာမေးပွဲအတွက် စာတွေကျက်မှတ်လေ့လာလိုက်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ မကြာခဏတော့ သူ့ Facebook Page ကို ကြည့်ဖြစ် ပါရဲ့ နှစ်ဦးသား တစ်ပြိုင်တည်းလိုလို အကြည့်မရပ်ခင်အထိပေါ့နော်။ ဥက္ကာကို လုံးလုံးကြီးမေ့သွားတာမဟုတ်ပေမယ့် မသိစိတ်ထဲမှာတော့ မကြာခဏသတိရဖြစ်တယ်ဆိုရပါမယ်။
‘အိုး….အိပ်ယာပေါ်မှာ လှဲလျောင်းပြီး အရင်ကအကြောင်းတွေ စားမြုံ့ပြန်နေဖြစ်တာ ဘယ်လောက်များကြာနေပါလိမ့်’
ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်က စောင်ပါးကို အမြန်ခွာကာ အိပ်ရာပေါ်ကထလိုက်ပါတယ်။ ခပ်မြန်မြန်လေးပဲ ပြတင်းပေါက်ကိုပိတ်လိုက်ပြီး အ၀တ်အစားလဲလှယ်လိုက်ပါတယ်။ အချိန်မဆိုင်းဘဲ လာခေါ်သူအတွက် အဆင်သင့်အနေအထားဖြစ်အောင်လုပ်ထားရမယ်လေ။ သာမန် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလေးတစ်ခု လက်ခံရရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော့် နှလုံးခုန်သံတွေက တော်တော်ပြင်းထန်ပါတယ် အခြားလုပ်စရာ တွေအကုန်ကို လျစ်လျူရှုမိတဲ့အထိပေါ့။ ဘယ်လောက်တောင် ခြေတုန်လက်တုန်ဖြစ်နေမိမှန်းမသိတော့ပါဘူး အတော်ကြာတယ် သူပေးခဲ့တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်လေးကို keypad မှာရိုက်လိုက် ပြန်ဖျက်လိုက်လုပ်နေတာ။ နံပါတ်လေးကိုရိုက်လိုက် contacts list လေးထဲက သူ့နံပါတ်ကို နှစ်ခေါက်သုံးခေါက် ဟုတ်မဟုတ်ပြန်စစ်ပေါ့။ အလုပ်တစ်ခုကို ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်လိုက်ရသလို စွမ်းအင်တွေလည်း ကုန်နေပြီထင်ရဲ့။
နောက်ဆုံးတော့ ဖုန်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။ စပီကာထဲက ring tone မည်သံလေးကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ နားထောင်နေတာ နောက်ဆုံး အသံရှည်တစ်ချက်ဆွဲကာ ဖုန်းဝင်သွားပြီးနောက် သူ့အသံကို ကြားလိုက်ရပါပြီ။
“ဟယ်လို….ငါ…ငါပါ အဲလက်စ်” ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ခါပြီး ကျွန်တော့်နှလုံးခုန်သံတွေဟာ ရင်ဘတ်ထဲကပြေးထွက်လာတော့ မယ့်အတိုင်းဖြစ်နေရပါတယ်။
“ဟေး……မတွေ့ရတာအတော်ကြာပြီ။ ဘာတွေလုပ်နေလဲ?” သူ့အသံက အတော်ငြိမ်တယ်။
“အာ….မင်း အလုပ်ရှုပ်နေရင် ငါ.. နောက်တစ်ရက်လောက်မှ တွေ့ကြတာပေါ့”
“မဟုတ်..မဟုတ် အဆင်ပြေပါတယ်ကွ၊ အပြင်ကို ခဏလောက်တော့ အပန်းပြေထွက်မလားလို့လုပ်နေတာ”
“မင်း အမေနဲ့အတူတူနေတုန်းပဲလား Alex?”
“အေး….နွေရာသီအားလပ်ရက်ဆိုတော့ ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးကွာ….သင်တန်းလည်းမတက်ချင်ဘူး။ မင်းကော ဥက္ကာ”
“အတူတူပဲ…..ငါ ဒီတစ်နှစ်တော့ နွေရာသီအားကစားသင်တန်းတွေဘာတွေတက်မနေတော့ဘူး”
“ဒီနှစ်က ကျောင်းစာတွေကို အချိန်ပိုပေးရတော့မှာကွ။ ငါ့အလုပ်က ကျောင်းမှာ အားကစားဆိုင်ရာတစ်ခုခုကိုလုပ် ဒါမှမဟုတ် အချိန်ပြည့် စာလုပ်ပဲ။ ငါ့မှာ လူငယ်သဘာဝ လည်ပတ်တာကိုမလုပ်ရတော့ဘူး”
“ငါ့အသုံးစရိတ်က cover ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတော့စိတ်ချ ငါသိပ်မသုံးဘူးလေ။ ဟေး….ငါတို့နှစ်စဉ် အပျော်ခရီးထွက်ကြတာ မကြာခဏပဲ နော်။ အခုလာမယ့် ရက်တွေအတွက်ကော အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားကွ?”
ကျွန်တော်ကဖြင့် သူပြောနေတုန်းမှာပဲ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ “ငါလား….နာရီဝက်အတွင်းအသင့်ပြင်ထားနိုင်တယ်ကွာ”
တယ်လီဖုန်းစကားပြောခွက်ကိုသူ့နေရာနဲ့သူချကာ အဖေတို့ ကားဂိုထောင်ထဲ ပြေးဆင်းသွားလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ စက်ဘီးလေး 21-speed hybrid လေးတစ်ကောင် နံရံမှာမှီလို့။ ကျွန်တော် စက်ဘီးတာယာတွေကောင်းမကောင်း ကျွတ်တွေလေရှိမရှိ၊ ချိန်းကြိုးတွေ အမဲဆီရှိမရှိ စစ်ဆေးလိုက်တယ်။ အားလုံး အားလုံး ဒုန်းဆိုင်းစီးဖို့အသင့်အနေထားပါပဲ။ ဟိုးအရင်ကတည်းက မိုင်အတော်များများ ဒီဟာ လေးစီးပြီးဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးပါတယ်လေ။
စက်ဘီးလေးကို ကျွန်တော့်ကားလေးပေါ်တင်လိုက်တယ်။ အော်….ဂျစ်ကားမောင်းရတာသဘောကျလို့ အခြားကားမစီးပဲ အမေရိကန် ဂျစ်ကားလေးတစ်စင်းအဖေ၀ယ်ပေးထားတယ်လေ။ ကျွန်တော် ဥက္ကာတို့အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ သူအဆင်သင့်ပြင်ထားတဲ့ သူ့စက်ဘီး လေးကိုကြည့်လိုက်တာ အံ့အားသင့်သွားတယ်ဗျ။ ဟိုးအရင်ဆယ်ကျော်သက်ဘ၀ကတည်းက သူစီးနေကျ မော်ဒယ်လ်စိမ်းခေါ်မလား အနုမြူစိမ်းရောင်ခေါ်မလား အစိမ်းရောင်တောက်တောက် စက်ဘီးလေး။
သူ့အိမ်ဂိုထောင်ထဲက ကားလေးကိုထုတ်မလို့ကြိုးစားနေပေမယ့် ကျွန်တော်က သူ့စက်ဘီးကို ကျွန်တော့်ကားပေါ်တင်လိုက်တာကြောင့် စတီယာရင်ဘေးက ခုံရှိရာတံခါးကိုဖွင့်ပြီး သူတက်လာတယ်။ အိုး…..တကယ့်ကို ကျစ်လစ်သန်မာတဲ့ အားကစားပုံဟန်က ပိုထင်းလာ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပိုပြီး အံ့အားသင့်ရတာက သူ့ရင်အုပ်မှာ အမွှေးနုလေးတွေတောထနေသလို….ပါးသိုင်းပေါ်မှာလည်း အမွှေးရိတ်ထားတာ စိမ်းနေတာပါပဲ။ အရမ်း Sexy ဖြစ်နေတယ်။
“အာ….မင်း ပါးသိုင်းမွှေးတွေ အဲ့လောက်ကြီးသန်လာတာလား?”
“ဟုတ်တယ်…..အရင်ကလို ဖိုးပြုံးချိုလေးပုံစံကနေ ခွဲထွက်ချင်လို့ မရိတ်ဘဲထားတာ”
“ကြည့်ကောင်းပါတယ်….မင်းပုံစံနဲ့တော်တော်လိုက်တယ်ကွ” ကျွန်တော် ပါးစပ်က မထိန်းနိုင်ဘဲလွှတ်ကနဲပြောဖြစ်သွားတယ်။”
“ငါဘာနဲ့တူနေလို့လဲ? အသက်ပိုကြီးတဲ့ပုံပေါက်နေလို့လား? ဒါပဲလေ…အဲ့တာကပိုမိုက်တယ်ကွ….ဒါထက် မင်းစက်ဘီးလား?”
“ဟုတ်တယ်ကွ။ တစ်နှစ်လောက်တော့ရှိပြီ။ မင်းကတော့ စက်ဘီးအဟောင်းကိုစီးနေတုန်းပဲမလား?”
“ငါစစီးကတည်းကဆိုတော့ တော်တော့်ကိုကြာနေပြီပဲ။ ငါတို့အိမ်ဂိုထောင်ထဲမှာ သေချာထားထားတာဆိုတော့ သိပ်တော့ မပျက်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အခုထိစီးလို့ကောင်းတုန်းပါပဲကွာ”
အစီအစဉ်ကတော့ မြစ်နံဘေးအတိုင်းစီးသွားကြပြီး လူတွေအပန်းဖြေတတ်ကြတဲ့ ကမ်းခြေသဲသောင်ပြင်မှာ အနားယူကြမလို့ပါပဲ။ တံတားလေးက နေကူးပြီး သစ်တောအုပ်ထဲကို မသွားဘူးဆိုတော့ ဥက္ကာကြည့်ရတာ ငယ်ငယ်တုန်းကပုံစံအတိုင်းသွားလာချင်တဲ့ ဟန်မတူပါဘူး။ ကျွန်တော် တော်တော်တော့စိတ်လှုပ်ရှားနေမိပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တွေမဟုတ်ကြတော့ဘူးဆိုပေမဲ့ နည်းနည်းတော့ စိတ်ရွှင်လန်း သည်ပေါ့။ ကျွန်တော့်အထင် ကျွန်တော်က သူ့ထက် ပိုရင့်ကျက်တဲ့ပုံပေါက်တယ်လို့ထင်တာပဲ တစ်ခါတလေပေါ့။ ရိုးရိုးလေး စက်ဘီးစီး ကြသည့် ဟန်ဆိုပေမယ့် ဒီနှစ်နှာရီ သုံးနာရီလေးက ကျွန်တော်တို့ အတိတ်က အမှတ်ရစရာလေးတွေကို ပြန်လည်ဖမ်းဆုပ်နိုင်ကြမယ် ပြီးတော့ ရှင်သန်နေတဲ့ ကာလအသစ်တွေအတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်တွေဖြစ်တည်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ဖို့ဆိုပြီး ကြိုတင်ပြင် ဆင်ထားတာမျိုး ကျွန်တော် မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။
ကားကို ယာဉ်ရပ်နားစခန်းတစ်ခုမှာ ရပ်ပြီး ကားပေါ်က စက်ဘီးလေးတွေကိုယ်စီကို မြေပြင်ပေါ်ချလိုက်ကြပါတယ်။ ဦးခေါင်းမှာ helmet လေးတွေ ကိုယ်စီးဆောင်းပေါ့။ ဥက္ကာ ပခုံးမှာတော့ နေ့လယ်စာအတွက် ထမင်းဘူးလားမသိ အိတ်နဲ့ထည့်လွယ်ထားတာ သတိပြုမိ ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဖြင့် နေ့လယ်စာအတွက် စဉ်းတောင်မစဉ်းစားမိဘူး။ ပြန်လာတော့မှာ ကားပါကင်က စားသောက်ဆိုင်မှာစားမယ်လို့ ရမှာပဲဟာ။
“အသင့်ဖြစ်ပြီလား ဘော်ဒါ?” ကျွန်တော် သူ့ကိုမေးလိုက်တယ်။
“အိုး…..ဖြစ်ပြီ….မစီးတာကြာပြီဆိုတော့ ငါ့ကိုစောင့်ပြီး ခပ်ဖြေးဖြေးနင်းနော်”
“မင်းကလည်း….အေးဆေးပါ။ စက်ဘီးစီးတာက ဘယ်အချိန်စီးစီးအတူတူပါပဲ။ ပထမအကြိမ် စက်ဘီးစီးသင်တာတတ်ကတည်းက စပြီး နောက်အကြိမ်တွေမှာစီးတော့ ဘယ်တုန်းကမေ့သွားဖူးလို့လဲဟ” ကျွန်တော် နှစ်လိုအားရပြုံးလိုက်မိပြီး ပြစ်တင်စကားဆိုလိုက်မိပါတယ်။
“ငါတို့ စက်ဘီးစီးနေကြတာနော်။ ငါ စက်ဘီးစီးနေတယ်လို့ ပြန်သတိထားဦး…ဟွန်း” ကျွန်တော်တို့ ရယ်မောမိကြပါရော။
ကျွန်တော်တို့တွေ တောင်ကုန်းလေးအတိုင်း နင်းတက်သွားကြကာ လမ်းကြောင်းအတိုင်းဆင်းလိုက်ကြပါတယ်။ အရင်က ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မတူ ပြောင်းလဲနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်း ခပ်သွက်သွက်နင်းဖြစ်ကြတာ အစက ခပ်နှေးနှေးဆိုပေမယ့် နောက်တော့လည်း အရှိန်မြှင့် နင်းလိုက်ကြပါရော။ ဥက္ကာ စက်ဘီးစီးတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ပထမတော့ ဟန်ချက်ညီအောင် သေချာထိမ်းနေရသေးတာပါ။ နောက်တော့ နှစ်မိုင်လောက်ကိုအေးဆေး နင်းနိုင်သွားပါပြီ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ သူ့ထက်စာရင် တော်တော်သွက်သွက် နင်းနိုင်ပါတယ်။ သူနဲ့ ကျွန်တော် အဆက်မပြတ်သွားအောင်တော့ အရှိန်လျှော့လျှာ့ပေးရတာတော့ရှိတာပေါ့နော်။
စက်ဘီးကို ဆက်လက်စီးသွားကြတာ မိုင်အတော်ဝေးဝေးထိပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ညာဘက်က တသွင်သွင်စီးဆင်းနေတဲ့ မြစ်ကြီးကလည်း ရင်ခုန်စဖွယ် ကြည်လင်ရှင်းသန့်နေလေရဲ့။ လေပြေလေညှင်းတွေကလည်း ဖြည်းဖြည်းသက်သာပဲ တိုက်ခတ်နေတယ်ဗျ။ စက်ဘီးစီး နေတော့ နဖူးကိုလေတွေတိုးနေတာကြောင့် နည်းနည်းတော့ အေးပြီး ခြောက်သွေ့ရသလိုခံစားရတယ်။
မိနစ်လေးဆယ်လောက် ဆက်စီးသွားကြပြီးနောက် ရုတ်တရက် ဥက္ကာရပ်တန့်လိုက်တယ်။ အစကတော့ ကျွန်တော်သတိမိပြုမိပါဘူး… သူအော်ခေါ်လိုက်မှ နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်မိတာ။ “Alex….စောင့်ဦးဟ” ဥက္ကာ တစ်ယောက်ဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ရင်း သစ်တော အစပ်မှာ အဲ…သစ်တောဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းခွဲထိပ်မှာရပ်နေတယ်။ သူ့ဆီပြန်နင်းလာဖို့ လက်ယက်ခေါ်နေရော။
ဥက္ကာရပ်နေတဲ့ လမ်းသွယ်လေးဟာ ခြောက်သွေ့ပြီး ဖုန်တထောင်းထောင်းတနေတတ်သော သစ်ရွက်တွေပြည့်နေမြဲ တံတားကျဉ်း လေးတွေရှိသော လမ်းကလေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ဥက္ကာ ဟိုးအရင် မခွဲခွာဖြစ်ကြခင်က မကြာခဏသွားခဲ့ကြပြီး ရင်တဖိုဖို တထိတ် ထိတ် တလန့်လန့် စိတ်ခံစားမှုတွေပေးတဲ့ ဧရိယာတစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ချုံတောတွေရယ် ဟိုအပင် ဒီအပင်ပုတွေရယ်ကို တောတိုးသွားရ တာ တစ်ခါတလေတော့ အသားအရေစပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်အောင် ခံစားရသေးတယ်။ လမ်းမှားစရာတွေအများကြီးရှိပေမယ့် သွားနေကျဆို တော့ လမ်းမမှားခဲ့ကြပါဘူး။
ဥက္ကာ အဲ့လမ်းကြောင်းထဲ ဆက်စီးသွားချင်နေသလားမသိ။
“သေချာတာပေါ့….နားရအောင်” ကျွန်တော့်ငယ်သူငယ်ချင်းလေးကို အေးဆေးမတွေ့ရတဲ့အချိန်က ကြာပြီဆိုတော့ သူတောင်းဆိုလာတဲ့ ဆန္ဒကို ခဏတာဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်လိုက်လျောညီထွေဘာကြောင့်မနေနိုင်ရမှာလဲနော် မဟုတ်ဘူးလား?
မြင်နေရသော မြက်ခင်းစိမ်းကမ္ဗလာကြီးကတော့ အသက်ကြီးတဲ့ပုံဟန်မရှိဘူး အမြဲစိမ်းလန်းပြီး ရှည်လျားနေမြဲ။ ထင်းရှူးပင်ကြီးတွေက လည်း မားမားမတ်မတ်နဲ့ ရပ်တည်နေကြတာက တမျော်တခေါ်ပါပဲ။ အကိုင်းအခက်တွေက ပင်ခြင်းယှက်နေပြန်တော့ နေပူဒဏ်ကို အနည်းငယ်တော့ အကာအကွယ်ဖြစ်သားပင်။ ဥက္ကာ မရည်ရွယ်ဘဲ သစ်ပင်တွေရဲ့ ဖျားယောင်းတဲ့အတိုင်း သစ်တောအုပ်ကြီးရှိရာဘက် ကိုသွားတဲ့ တံတားလေးကိုဖြတ်ပြီး စက်ဘီးကိုနင်းသွားတယ်။ အမှတ်တရဖြစ်ရပ်များရှိရာ အရပ်ကိုသူ့မသိစိတ်ကသွားနေတာဆိုတော့ ကျွန်တော်သည်လည်း အလိုက်သင့် အသာလိုက်သွားလိုက်တာပေါ့နော်။ ဒီနေရာလေးရောက်ရင် ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်တွေက မကြီးတော့သလို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိတ်ဆွေသံယောဇဉ်သည်လည်း ဘယ်တော့မှ ကွဲကွာသွားခြင်းမရှိ။
ဥက္ကာက သူဦးတည်သွားနေတဲ့ သစ်ပင်ကြီးရှိရာကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ လက်ယက်ခေါ်တယ်။ “မင်း ဒီနေရာလေးကိုမှတ်မိလား အဲလက်စ်”
“မင်းသိလား…..ငါဒီနေရာလေးကို အရမ်းသဘောကျတာပဲ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ထိတွေ့နိုင်ပြီး လွတ်လပ်သွားသလိုခံစားရတယ်။ ငါတို့လတ်တလောလည်ပယ်နေရတဲ့ဘ၀တွေကနေ လွတ်မြောက်သွားရသလိုပဲ။ ငါတို့သဘော ငါတို့စိတ်ခန္ဓာအတိုင်း နေနိုင်သလိုပဲ ကွာ ခံစားရတာလေ”
“ကောလိပ်က မင်းကို စာကောင်းကောင်းသင်ပေးလိုက်တယ်နဲ့တူတယ်”
“မင်းစကားသံတွေက ကဗျာဆရာတစ်ယောက်လိုပဲလေ။ ဟိုးအရင်က ဒီလိုစကားမျိုး မင်းပြောတာ ငါကြားမှမကြားဘူးခဲ့တာ”
“မင်းမကြားဘူးသေးတာ မင်းမသိသေးတာ အများကြီးရှိပါသေးတယ်ကွာ” ဥက္ကာက စကားကိုအဆုံးသတ်ရင်း သစ်ပင်ခြေရင်းက မြက်ခင်း ပြင်ပေါ်ကိုထိုင်ချလိုက်တယ်။ သူထိုင်ချလိုက်တဲ့အနေအထားက ကျွန်တော်နဲ့ တော်တော်နီးနီးကပ်ကပ်ပုံစံလေးဖြစ်နေပေမယ့် ကျွန်တော် နေရာမရွှေ့မိဘဲ သူနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေအပေါ်အတွေးဝင်မိပါရဲ့။ သူ ဒီစကားလုံးတွေကို တုန့်ဆိုင်းမှုမရှိဘဲ ပြောထွက်ခဲ့တာပဲ။ သူ့ဆီက ကျွန်တော် မကြားရ မသိသေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာ သူဘာကိုဆိုလိုပါ လိမ့်။
ဥက္ကာက ပြန်ပြောတယ်…”မင်းသိလား…..ငါဒီကို ရောက်အောင်လာနိုင်လိုက်တာကိုဝမ်းသာနေတာ။ ဒီနေရာကိုပြန်လာကြည့်ဖို့ တော်တော် ကြောက်လန့်နေခဲ့တာ။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ဒီပတ်ဝန်းကျင်လေးကို အရမ်းလွမ်းတယ်။ ငါ့မှာ ကျောင်းရယ် အားကစားကိစ္စတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တာလေ။ အဲဒါတွေနဲ့ အထာကျဖို့လုပ်နေရတာနဲက တစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်။”
“အင်း….မင်း ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ ငါသဘောပေါက်ပါတယ် ဥက္ကာ”
“မင်းသေချာသိချင်လည်းသိမှာပေါ့။ အဲ….မင်းသိမှာပါလေ။ ငါ မင်းကိုယုံကြည်နိုင်ပါတယ်။ ငါတို့တွေ အသက်ကြီးလာကြပြီပဲဟာ။ ကလေးဘ၀က လွန်မြောက်ခဲ့တာကြာပေါ့နော်” ဥက္ကာအသံက ခပ်တိုးတိုးလျော့ပါး နိမ့်ဆင်းသွားပါရဲ့။ “ငါ မင်းကိုတစ်ခုခုမေးလိုရမလား? မေးရမလား သူငယ်ချင်း?”
သူအမေးစကားဆိုဖို့အရေးဘာတွေတွန့်ဆုတ်နေပါလိမ့်။ ကျွန်တော်သိတယ် သူနဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာ စကားလုံးကိုသေချာရွေးပြော မှ အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာကိုလေ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သားကြား ခင်မင်မှုကိုထိခိုက်သွားစေမယ့် တုန့်ပြန်စကားမပြောမိအောင်ပါ။
“ဖြစ်နိုင်ပါတယ် မေးနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ”
“ဟေး…မင်းဘယ်လိုပဲအဖြေပေးပေး ဘာမှပြောင်းလဲသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ ငါက မင်းသူငယ်ချင်းဖြစ်နေဦးမှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ မင်း မမေးစေချင်ဘူးဆိုရင် ငါမမေးဘူးရယ်”
ကျွန်တော့်နှလုံးခုန်သံတွေ ဒုန်းဆိုင်းပြေးကုန်ပြီ။ သူနဲ့ခင်မင်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်အတွင်း ကြားရတော့မယ့် မေးခွန်းတစ်ခုအတွက် ပထမဆုံးပြန်လည်နိုးကြားလာခြင်းဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော် တစ်သက်လုံးလျှို့ဝှက်ထားတော့မယ့်ကိစ္စဟာ သူ့အမေးစကားနဲ့အတူ ဖွင့်ဟလိုက်ရတော့မလားနော်။
ဒါပေမဲ့ ဥက္ကာ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးသိပ်မမေးပါဘူး။ ကျွန်တော့် ဒူးစွပ်လျောကျတာကို သူလှမ်းကိုင်လိုက်ရင်း ကျွန်တော့်ပေါင်သားပေါ်ကို လက်တင်ထားတာ မရုပ်သိမ်းဘူးဗျ။ ကျွန်တော် တွန့်တာရွေ့လျားတာမလုပ်ဘူးဆိုတာ သူသတိထားမိခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့လက်ကို အသာပြန်ပြီး ရုပ်သိမ်းသွားပါတယ်။
သူက ဆက်ပြီး “Alex ငါ မင်းကို ဖုန်းကွယ်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတယ်။အခုတော့ မင်းကိုသိစေချင်လာပြီ။ ငါ…..ငါဒီနှစ်တွေ အတွင်းမှာ ငါ့ကိုယ်ငါ ဂေးဆိုတာသိလာရတယ်”
ကျွန်တော် မူးမေ့သွားတော့မတတ် ဟန်အမူအယာမျိုး သရုပ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားမိပေမယ့် သိပ်တော့မပီပြင်ခဲ့ပါဘူး။ မျက်နှာတော့ ခပ်တင်းတင်း ဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်။ “မင်း…မင်းဟာက သေချာလို့လား?”
“ငါ့ကိုယ်ငါ ဘာဆိုတာသိလိုက်ရတာက အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တယ်ထင်တာပဲကွာ”
“ဟုတ်တယ်….ငါ အတော်စဉ်းစားခဲ့ရတယ်” ဥက္ကာ အဲ့ဒီစကားကို ထူးဆန်းတဲ့ ရယ်သံတစ်မျိုးနဲ့ပြောခဲ့တယ် ကျွန်တော့်ကိုပေါ့။ နာကျင်တာလား နာကြည်းတဲ့ မခိုးမခန့်ရယ်သံများလားပဲ။ နောက်တော့ သူ့ကိုယ်သူ အားတင်းလိုက်တဲ့ လေသံပေါက်အောင် ပြောင်းပြောတယ်။ “ငါဆိုလိုတာက မင်းအဲဒါကိုသိပြီးသားလားလို့”
ဥက္ကာ တော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့တာပါ။ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးဟာ ထိတ်လန့်မှုတစ်မျိုးကြောင့်များလားမသိပါဘူး မသိမသာ တဆတ် ဆတ်တုန်ရီလို့။ ကျွန်တော်သည်လည်း စိတ်လှုပ်ရှားတုန်လှုပ်နေခဲ့တာပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့အပေါ် တပ်မက်စွဲလမ်း နေတဲ့ ကျွန်တော့်လျှို့ဝှက်ချက် သူ့ကို ဖွင့်ဟဖို့ ၀န်ခံလိုက်ဖို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကို လိုချင်နေခဲ့တာ။ ဒါ…ဒါ နှစ်ဦးသား အချိုးမကျဖြစ်နေတဲ့ ဟန်ချက်ပျက်နေတာတွေပါလေ။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဖွင့်ဟ၀န်ခံလိုက်ကြဖို့ကိစ္စကို ပြောလည်းပြောချင်ကြတယ် တစ်ချိန် တည်းမှာ တုန့်ဆိုင်းကွယ်ဝှက်လိုကြသေးတယ်။ အခုတော့ ဥက္ကာက အရင်ဆုံး ဖွင့်ဟလိုက်ခြင်းပေါ့။ ကျွန်တော်လည်း မကြာခင် လိုက်ပါ ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ရင် ကျွန်တော် ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမယ့်အဖြစ်အပျက်ကို ရင်မဆိုင်ရဲစွာ ထိတ်လန့်နေမိပါသေးတယ်။ ဟူး…..။
“အခု…ငါအမေးချင်ဆုံးမေးခွန်းက….ငါ ဂေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေရင် ငါတို့သူငယ်ချင်းကဏ္ဍကရှေ့ဆက်ရှိနေနိုင်ဦးမလား?”
“ဒါပေါ့…ဘာလို့သူငယ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ” ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ စကားသံနှေးသွားပေမယ့် “ငါလည်းအတူတူပဲထင်တယ်” လို့ ထပ်ပေါင်းပြောလိုက်ပါတယ်။
“အဲလက်စ်…..မင်းမဟုတ်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုကို အခြားလူတစ်ယောက်ကိုအားနာတာနဲ့ တမင်ဝန်ခံစရာမလိုဘူးနော်။ ငါဘာဆိုတာမင်းကို ပြောပြပြီးပြီ။ မင်းက ငါ့ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ် ငါယုံကြည်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်လို့ မင်းကိုအရင်ဆုံးဖွင့် ပြောချင်ခဲ့တာ”
အား….စိုးရိမ်မှုရဲ့ စည်းချက်တွေ လှုပ်ခတ်နေသလားပဲ။ ကျွန်တော် ဖွင့်ဟ၀န်ခံတယ် အမှန်အတိုင်းပြောခဲ့တယ် သူပြောဆိုဖွင့်ဟ ခဲ့သလိုပဲ။
“ငါ…ငါလည်း ဂေးအစစ်တစ်ယောက်ပါပဲကွာ” အဲ့တာဟာ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကနေ ပထမဆုံးအကြိမ်ထွက်ကျလာတဲ့ စကားလုံးတွေပါပဲ။ ကျွန်တော့်စိတ်ခန္ဓာတွေလွင့်မျောပြီး လျှို့ဝှက်ချက်ကို ပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်ဟဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့ အခြားသောလူသားတစ်ဦး ဥက္ကာဆိုတဲ့သူ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ “ငါ မင်းကိုပြောပြချင်ခဲ့ပါတယ်ကွာ….ဒါပေမဲ့ မင်းငါ့ဆီလာမတွေ့တော့မှာစိုးရိမ်လို့မပြောဖြစ်ခဲ့တာ”
“အမှန်ပြောရရင် ငါ့ကိုယ်ငါဘာဆိုတာသိဖို့ မင်းကိုလေ့လာခဲ့ရတာဗျ”
“တကယ်? အမှန်ကြီးလား? ဘယ်လိုသိတာလဲဟင်?”
“ငါ မင်းရှေ့မှာ အင်္ကျီချွတ်ခဲ့တဲ့ အချိန်လေးကို သတိရလား မင်းအိမ်မှာ ငါအ၀တ်လဲတုန်းကလေ? အေး….မင်း အကြည့်လွှဲလွှဲသွားတာကို ငါမြင်ခဲ့တယ်။ ငါသိဘူးတဲ့လူတစ်ယောက်ကလည်း မင်းလိုပဲ ငါ့ကိုမကြည့်ဘဲ အ၀တ်ချွတ်လိုက်ချိန်မှာ အခြားကိုပြောင်းကြည့်တတ်တဲ့ ဟန်ကို ပြန်သတိရသွားတာလေ”
ကျွန်တော့်မျက်နှာတစ်ခုလုံး ပန်းသွေးရောင်ထသွားပြီး တခါတည်း ရယ်သွမ်းသွေးမိပါတယ်။ နှစ်ယောက်သားကြား အတားအဆီးမရှိ လွတ်လွတ်ပြောဆိုနိုင်ကြပေမယ့် ကျွန်တော့်မျက်နှာကတော့ ရှက်စိတ်မွှန်ပြီး နီရဲဆဲ။
“Alex ငါ အခြားမေးခွန်းတစ်ခုလောက်ထပ်မေးလို့ရမလား?”
“ငါတော့ တစ်ယောက်နဲ့ချိန်းတွေ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ပါတ်လောက်ပါပဲ စိတ်ထဲ serious သိပ်မဖြစ်တာနဲ့လေ”
“ဒါဆို အဲ့လူနဲ့မင်း လိင်ဆက်ဆံဖြစ်ခဲ့လား?”
“အာ…ဖင်ထဲတော့ မထည့်ဘူး။ သူ့ကို ငါ blowjob ပဲလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ relationship တစ်ခု တကယ်တည်ဆောက်မိချိန်အထိ ငါ့နောက်ပိုင်းကို သိမ်းထားမှာလေ ဟာ ဟ”
“စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသားကွ။ သူ့ပါးစပ်က မာန်ဖီသံလိုလို မိန်းမောသံလိုလိုအသံတွေထွက်လာတာကိုကြားရတာ ငါ့စိတ်ကို အရမ်းထန်စေတယ်လေ အဲဒါဖီးလ်ပဲ”
“ဒါဆို မင်းက သူ့ကိုကောင်းကောင်း ကီးပေးလို့ဖြစ်မှာပေါ့”
“အေး…ကီးတာ…အော် ဟုတ်မှာပေါ့။ မင်းကို ငါအမှန်ပြောရရင် သူ့ကို ငါဖြတ်ပြစ်လိုက်တာ”
“ငါ့စိတ်ထဲမှာ သက်သောင့်သက်သာမဖြစ်သလိုပဲ။ သူက အရမ်းမိုက်တဲ့ဘဲဆိုတာ သေချာပါတယ်။ အရမ်းကိုကောင်းမွန်တဲ့ ကိုယ်ရေကိုယ်သွေးရှိတယ် ပညာတတ်တယ် ပိုက်ဆံရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါတို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တကယ် မငြိလောက်ပါဘူး။ မင်းနဲ့ ငါ့ဆက်ဆံရေးလောက်တောင် ဖီလင်မလာဘူးလေ”
ငါတို့မငြိကြဘူး? ကျွန်တော် အဲ့ကိစ္စတွေးမိခဲ့သင့်တယ်။ တကယ်တန်းတော့ သူပြောသလိုပါပဲ တစ်ကမ္ဘာလုံးက အခြားသော ခပ်မိုက်မိုက် ငနဲတွေနဲ့ အတူတွေ့ဆုံနိုင် ငြိတွယ်နိုင်ပေမယ့် ဥက္ကာနဲ့ အခုလို အရိပ်အေးအေးကိုပေးစွမ်းနေတဲ့ သစ်ပင်ကြီးရဲ့အောက်မြက်ခင်းပြင်ပေါ် အတူထိုင်နေရတာလောက် မငြိဘူး ရင်ထဲ။
“အရိုးသားဆုံးပြောရရင် ငါ အသင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရမှာပေါ့။ ငါ့ကိုယ်ငါ နားလည်ဖို့ ကြိုးစားနေဆဲပါပဲ”
ကြီးကျယ် ရှားပါးသော နားလည်သိတတ်မှုနှင့် စာနာတတ်မှုတို့ ဥက္ကာဆီမှာရှိနေတယ်။ “ငါတို့ သူငယ်ချင်းဆက်ဖြစ်သွားကြမယ်လေ။ မင်းနဲ့အတူတူရှိနေချိန်ကို အရမ်းသတိရတယ်။ ငါရယ် မင်းရယ် အတူရှိနေချိန်တွေအကုန်လုံးကို လွမ်းနေတာဗျ။ ဘယ်နေရာမှာနေနေ အဲ့လို မခံစားရဘူး မခံစားတတ်ဘူးပြောရမယ်။ အားကစားတွေလုပ်တဲ့အချိန် ကောလိပ်မှာစာသင်နေတဲ့အချိန်တွေမှာလဲအတူတူပဲ။ မင်းနဲ့ငါအတူရှိချိန်လေးပဲ ငါ့ကိုယ်ငါစိတ်ကပ်တော့တယ်။ ငါတို့ရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေကို အသစ်တစ်ဖန်ပြန်စချင်နေသလိုခံစားရတယ်။ အာ…ငါမေ့တော့မလို့….ဒီမှာ”
ဥက္ကာ သူ့ပခုံးမှာ လွယ်လာတဲ့ နေ့လယ်စာအိတ်ကို ချွတ်လိုက်ပြီး နှစ်ယောက်သားကြားချကာ အိတ်ရဲ့ဇစ်ကိုဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်။ နောက်တော့ ရစ်ပတ်ထုပ်ပိုးထားတဲ့ Sandwich တွေကို ထုတ်လိုက်ရော။ “ငါ မြေပဲထောပတ်သုပ်ထားတာရယ် ဂျယ်လီ sandwich တွေရယ် နည်းနည်းပါလာတယ်။ တစ်ခုလောက်စားကြည့်ပါလား စားမလား?”
ပေါင်မုန့်တွေဖြင့် အိနေပြီ သူ့ကိုယ်ငွေ့ကြောင့်များလားမသိ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့မှာ ရယ်ရယ်မောမောဖြင့် အရသာရှိစွာ အကုန် စားမိနေကြပါတယ်။ စိမ်းမြသော မြက်ခင်းပေါ်ဝယ် ပြန်လည်ထိတွေ့ရသော လတ်ဆတ်မှုနဲ့အတူ ရွှင်မြူးမိကြရော။ ကျွန်တော်တို့ ဖြတ်သန်းခဲ့သော အထက်တန်းကျောင်းတက်စဉ်ကာလကအကြောင်းတွေ ဘယ်လို ရူးရူးနှမ်းနှမ်းအရူးထခဲ့တာတွေကိုရော ပြောဖြစ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွဲပြားခြားနားသော ကောလိပ်တွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနာဂါတ် စီမံချက်တွေအကြောင်းလည်းပြောဖြစ်ကြတာပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ စကားစမြည်ပြောတဲ့အချိန်အတွင်း ဥက္ကာတစ်ယောက် သူဝတ်ထားတဲ့ ရှပ်အင်္ကျီကိုဆွဲချွတ်ဖို့ဟန်တပြင်ပြင်နဲ့။ ဒီအချိန်မှာ တော့ သူအင်္ကျီမချွတ်ခင် အရင်ပြောပြီးမှ သူဝတ်ထားတဲ့ တီရှပ်အင်္ကျီကို ခါးနားကနေအပေါ်ကိုမပြီးချွတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော် ဘာစကားမှမပြောနိုင် အေးခဲသွားပါရော။ ပန်းပုထုထားတဲ့အတိုင်း သူ့ကိုယ်ပေါ်ကကြွက်သားတွေဟာ အချိုးအစားကျနစွာပေါ်ထွက်လာ တာများ သူ့ရင်အုပ်တွေ သူ့abs တွေက ထင်းကနဲပဲ။ ရင်အုပ်အစပ်ကနေ ဆီးစပ်အထိ သေးသေးမျှင်မျှင်ပေါက်နေတဲ့ အမွှေးနုအတန်း လေးဟာ တကယ့်ကို မြင်သာပြီး စိတ်ကိုမရိုးမရွဖြစ်စေလွန်းပါတယ်။
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါတော့ အရှက်သည်းပြီး မျက်နှာလွှဲတာတွေဘာတွေမလုပ်တော့ဘဲ ဥက္ကာ ကိုယ်ခန္ဓာကို စိုက်ကြည့်မိနေတာ သူရယ်ရယ်မောမောဖြစ်သွားတဲ့အထိပဲ။ ကျွန်တော့်မျက်နှာဟာ သူ့ကိုယ်လုံးကို မျက်နှာမူတဲ့ပြီး အတန်ကြာငြိမ်သက်နေတော့ ဥက္ကာတစ်ယောက် သဘောကျသွားတယ်ထင်ပါရဲ့။
“အိုကေ…တော်လောက်ပြီ။ အခု မင်းကော ဘာတွေရှိလဲ ငါကြည့်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ”
ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီကို မချွတ်လိုက်စဉ်မတော့ နည်းနည်းရှက်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်က ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်နဲ့ အချိုးအဆစ်တွေက တော့မဆိုးပေမဲ့ ကြွက်သားဆိုင်တွေက သူ့လောက်မတောင့်တင်းဘူးလေ။ ကျွန်တော် အင်္ကျီချွတ်စဉ်မှာ အကူအညီလိုမလားဆိုပြီး သူ့လက်တွေက ကျွန်တော့်ခါးအစပ်ကို တတို့ထိထိ။ အ၀တ်ချွတ်လည်းပြီးရော သူက “မင်းလည်း မဆိုးပါဘူး….အကုန်လုံးကြည့်ရတာ အတော်ပါပဲ”
“ငါတကယ်ပြောတာပါ…..ပုံစံမျိုးစုံကိုသဘောကျပါတယ်ကွ။ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ပုံဟန်ကို အချိုးကျပေါင်းစပ်ထားတာပဲဟာ။ ငါတို့ပုံစံ ကို ငါတို့ပဲပိုင်ဆိုင်တာလေ အခြားလူတွေမှာမှမရှိတာ။ ငါတော့ ကြိုက်တယ်”
ကျွန်တော် သူပြောတာကိုသဘောတူကြောင်း ဟန်အမူအယာပြဖို့ ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ငြိမ့်ပြလိုက်တယ်။
ကျွန်တော်နှင့် ဥက္ကာ နှစ်ယောက်စလုံး အပေါ်အင်္ကျီမရှိကြ မရှက်မကြောက်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ကျွန်တော်တို့ဘာဆိုတာ သိလိုက်တဲ့ ခဏ အချိန်မိနစ်တိုင်းဝယ် ပျော်ရွှင်နေတဲ့စိတ်ကြောင့် အရှက်ကင်းသလိုဖြစ်နေကြတယ်ထင်ပါရဲ့။လွတ်လွတ်လပ်လပ် စိတ်ထဲမှာ အတား အဆီးမရှိကြသလို ကျွန်တော်တို့ အ၀တ်မထိသော အသားပြင်တလျှောက် ချွေးစက်လေးတွေခိုသီးလို့။
ဥက္ကာ သူ့ခြေတစ်ဘက်ကို မတဲ့ပြီး သူ့ရှူးဖိနပ်တွေကိုစချွတ်ပါတယ်။ ‘ဟေ့…မင်း ဘာလုပ်တာလဲကွ” လို့ ကျွန်တော်မေးလိုက်မိရော။
“ငါ ပိုပြီး သက်သောင့်သက်သာနေလို့ရအောင်ပါကွာ” သူ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ခါးပတ်ခေါင်းကိုဖြုတ်ပြီး သူ့ဂျင်းဘောင်းဘီကနေ ဆွဲထုတ်လိုက်ရော။ “အာ….အရမ်းနေလို့ကောင်းတယ်ကွာ….ဒီခါးပါတ် ပါတ်ထားရတာလူကို ကျဉ်းကြပ် နေတာပဲ….ငါ့ခါးအရေပြားကိုကြည့်ကြည့်…ဒီမှာ”
ခါးပါတ်ကို တင်းကြပ်နေအောင်ပါတ်ထားတာကြောင့် သူ့ခါးတစ်ဝိုက်မှာ အရှိုးရာကြီးကိုထင်းလို့။ ဥက္ကာ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာကို စူးစမ်းစမ်းသပ် ဖို့ ကျွန်တော့်ကို ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်က သိပ်မမြင်ရဘူး ဘောင်းဘီကို အောက်ကိုနည်းနည်းထပ်လျောပေးပါလားလို့ အကြံ ပေးလိုက်တော့ သူလည်း အလိုက်သင့်အောက်ကိုလျောချလိုက်ပြန်တာကြောင့် ရင်ခုန်စဖွယ် အရှိုးရာတစ်ခုကိုရှင်းကနဲမြင်ရပါရဲ့။ အိုး…. ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ညီဘွားက အလိုက်ကန်းဆိုးမသိ ဂျင်းဘောင်းဘီထဲကနေ အတင်းတွန်းကန်နေတယ် အပြင်ကိုထွက်ချင်လို့ထင် ပါ့။
“မင်းပေါင်ကြားက ကောင်ကလေးက သူပုန်ထနေပြီမဟုတ်လား…ငါမြင်နေရပါတယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်”
ဘာပြန်ပြောရမယ်မှန်းကိုမသိတော့ဘူး သူ့အကြည့်သူ့စကားတွေကြောင့် ရှက်ရွံ့သွားမိပါတယ်။ သူ့မျက်လုံးတွေက ကျွန်တော့်ဆီးစပ် တစ်ဝိုက်ကို စိုက်ကြည့်နေတာကိုး။ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံကို ဒီလိုသိသိသာသာစိုက်မကြည့်ဖူးဘူးဗျာ။ သူ မြက်ခင်းပေါ်ကိုပြန်ထိုင်ချလိုက်ပြီး ကျွန်တော့်နံဘေးနားကို တိုးကပ်လှဲလျောင်းလိုက်ပါတယ်။ သူ့နှာခေါင်းက ၀င်သက်ထွက်သက် လေငွေ့နဲ့အတူ သူ့ကိုယ်နံ့ကိုတောင် ကျွန်တော်ရရှိမိသလိုပဲဗျာ။ “Alex မင်းအတွက် သက်သောင့်သက်သာ မဖြစ်မယ့်ကိစ္စမျိုးကို ငါမလုပ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မင်းကို ငါ တို့ထိခွင့်တော့ပေးမယ်မဟုတ်လား? မင်းက ဟင့်အင် လို့ငြင်းနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင် ငါတို့ ဘာမှမဖြစ်သလိုပဲ အနားယူလိုက်ကြတာပေါ့”
ကျွန်တော် ဘာမှ တုန့်ပြန်စကားမဆိုဖြစ်ပါဘူး။ ခေါင်းလေးကိုပဲ အသာငြိမ့်ပြမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ ကျွန်တော့်အနားကို ပိုမိုတိုးကပ်လာရင်း “မင်းအတွက် အသင့်မဖြစ်ဘူးဆိုရင် ငြင်းနော်။ မင်းအတွက် တကယ်အသင့်ဆိုတဲ့အချိန်မဟုတ်သေးရင် ငါဘာမှမလုပ်ဘူးရယ်” တဲ့။
ကျွန်တော် ကျွန်တော် သူ….ကျွန်တော့်အပေါ် ခံစားချက်တစ်စုံတရာရှိစေချင်ပါတယ်။ သူသာ ကျွန်တော့်ကို ပွေ့ဖက်လိုက်မယ်ဆိုရင် လောကကြီးမှာ အပြည့်စုံဆုံးဖြစ်သွားမှာပဲ။ ကျွန်တော့်မှာ သူ့ကိုတပ်မက်တဲ့စိတ်တွေ တောင့်တတဲ့စိတ်တွေခံစားနေရတာများ အချိန် အတော်ကြာပြီဆိုတာ သူမသိဘူး။ အာ….ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားမှ ညီဘွားက ငြင်းပယ်ခွင့်ပေးမယ်မထင်ပါဗျာ။
“မင်းအတွက် အဆင်မပြေဘူး သက်သောင့်သက်သာမဖြစ်ဘူးဆိုရင် ချက်ခြင်းပြောနော်။ ငါ့ကိုကတိပေးရမယ်”
ဥက္ကာ တစ်ယောက် ကျွန်တော့်စိတ်အခြေအနေကို သေချာဆန်းစစ်သိချင်ပုံပါပဲ။ သူ ကျွန်တော့်ခါးက ခါးပတ်ကိုအသာအယာဖြုတ်တယ်။ ပြီးတော့ ဘောင်းဘီကြယ်သီးတွေကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တစ်လုံးခြင်း ဖြုတ်ကရော။ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက တီးတိုးညည်းညူမိသလို သူ့လက်နွေးနွေးတွေက ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကို ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်လိုက်တာကို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ သူ အဲတာတွေကို ငြင်ငြင်သာသာ လေးပွတ်သပ်နေတာများ တကယ်ဘယ်လိုလေးမှန်းမသိဘူးဗျာ သူ့နှာဝက လေပူနွေးနွေးလေးတွေကလည်း ကျွန်တော့်ဗိုက်သားပြင်ကို ကလိနေတာ ကလိကလိဖြစ်နေပါရော။
“ငါ ကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်လို့ရအောင် မင်းဘောင်းဘီတွေကို နည်းနည်းလောက် အောက်ကိုလျောချပေးပါလား”
ကျွန်တော်တို့လဲလျောင်းနေတဲ့မြက်ခင်းပြင်ဝန်းကျင်ကို ဟိုသည်ကြည့်လိုက်တယ်။ ဘာမှထိခိုက်စရာ မရှိလိုက်ပါဘူး။
“ဒီပတ်ဝန်းကျင်နေရာက ဘယ်သူမှမလာပါဘူးကွာ။ ပြီးတော့ ဒီလောက်ချောင်ကျတဲ့နေရာကို ဘယ်သူမှလည်း မရောက်ခဲ့ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မင်းမလုပ်ချင်ရင် အခုပဲရပ်လိုက်မယ်လေ”
ကျွန်တော် ၀တ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီကို အောက်ကိုပိုလျောအောင်ကြိုးစားတဲ့ဟန်က ဥက္ကာ ကမ်းလှမ်းတဲ့စကားကို အကောင်းဆုံး တုန့်ပြန် လိုက်ခြင်းပါပဲ။ သူ့လက်နှစ်ဖက်က ကျွန်တော့်တင်နှစ်ဘက်နှင့်ကပ်နေတဲ့ ဘောင်းဘီဘေးသားကို အသာလှမ်းကိုင်ဆွဲကူချွတ်ရင်း ပေါင် လယ်လောက်ရောက်တဲ့အထိ ဆွဲချလိုက်တယ်။ ရုတ်တရက်ဆိုသလို အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တာကြောင့် ကျွန်တော့်ညီဘွားဟာ ခေါင်းတ ရမ်းရမ်းနဲ့ခါသွားရပါရော။ ဥက္ကာရဲ့မျက်နှာပြင်ဝယ် ခပ်ကြီးကြီးပါးချိုင့်တွေပေါ်လာတဲ့အထိ ပြုံးရယ်မှုပေါ်လာရင်း ကျွန်တော့်အစိတ်အပိုင်း တွေကို သူစေ့ငုကြည့်ရှုပါတယ် အားရပါးရ။
“မင်း -ီးက တော်တော်လှတာပဲကွ…”
သူအလုပ်လုပ်သလို စနစ်တကျနဲ့ လက်အစုံကို ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေကို မသိမသာပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်သလို လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ငပဲကို ကိုင်ပြီး အခြားလက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကိုပွတ်သပ်တာမျိုးလည်းလုပ်ပါတယ်။ သူ့လက်အစုံက သန်မာနွေးထွေးနေပြီး ပွတ်သပ်မှုတွေက တကယ်ငြင်သာနုညံ့တာကြောင့် ကျွန်တော့်အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံး လေဟာနယ်ထဲရောက်နေသလို မိန့်မိန့်မူးမူးမျောပါမိပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်….အာ…အသည်းထဲကယားသလို…အာ… ဟို အရင် လက်သမားလုပ်တဲ့အချိန်များစွာရဲ့အတွေ့အကြုံများစွာထက်သာပါရောလား။
စကားတစ်ခွန်းမဆို ဥက္ကာ သူ့ဦးခေါင်းကို ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံရှိရာကိုငုံ့ကိုင်းလိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ငပဲကိုငုံခဲလိုက်ပါတယ်။ သူ့လျာဖျားလေး ဟာ ကျွန်တော့် ဆီးစပ်က အမွှေးနုလေးတွေကို ထိုးမွှေတယ်….အ…ပြီးတော့ ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်ဝလေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ကလိတယ် … နောက်တော့….ပူနွေးနေတဲ့သူလျာဖျားလေးဟာ ကွမ်းသီးခေါင်း အောက်ဖက်အကြောဆုံကို ရစ်ကာ ရစ်ကာဝိုက်တယ်….အာ….ထိပ် အရေပြားကို ပြန်ဆွဲဖုံးလိုက် အောက်ပြန်ဆွဲချလိုက် အဲ့ကြားထဲကို လျာကိုထိုးထိုးကလိလိုက် ကျွန်တော့်စိတ်တွေ လွတ်လွတ်သွားသလို ခံစားနိုင်ရပါတယ်လေ။ သူ့လျာကိုအပြားလိုက်ထားပြီး ကျွန်တော့်ငပဲကို ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကို လျက်လိုက် ထိပ်ပိုင်းအပေါက်ဝလေး ကို တို့တို့ကစားလိုက်လုပ်တာက သက်ပြင်းအခါခါချနေမိပါရဲ့။ ကျွန်တော် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိတော့ပါဘူး။ ဟိုအရင်က ဒီလိုခံစားချက်မျိုးမခံစားခဲ့ရဖူးပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အာ…..ဥက္ကာ ကျွန်တော့်ငပဲကို ကွမ်းသီးခေါင်းကနေ အောက်ခြေ အထိ သူ့လည်မျိုထဲထိတိုင် လျောကနဲမျိုချလိုက်ပြီ။ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်စွာအော်ညည်းရပါပြီ။ ဥက္ကာရဲ့ဦးခေါင်း ကလည်း တလှုပ်လှုပ်နဲ့မြန်နေသလို တစ်ခါတစ်ခါ lollipop စုပ်သလို လုပ်လိုက်တာများ ကလေးတစ်ယောက်က သူ့အကြိုက်အရသာ ကို စားနေရတဲ့အတိုင်းဗျာ။
ကျွန်တော့်ငပဲကတစ်ဆင့် သုက်ရည်တွေ ပန်းထွက်မသွားစေရေး ကြိုးစားရတာများ အသေးစားတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့ စစ်သားတစ်ယောက် လိုပါပဲ တင်တွေကိုကျုံ့ စိတ်တွေကိုအတင်းဟိုသည်ပို့ တစ်နှစ်သုံးလေးရေတွက်ရတာရှိသေး ကြားဖူးသမျှနည်းတွေနဲ့ပေါ့လေ။ ဘယ် တုန်းကမှ မခံစားခဲ့ဖူးတဲ့ ဖီလင်ကိုပျောက်ဆုံးသွားမှာကြောက်တာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သလို သူ့ပါးစပ်ထဲကို ကျွန်တော့်သုက်ရည်တွေ ပန်းထွက်သွားမှာ စိုးရိမ်တာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အပြင် တစ်နေရာရာ….အာ…..သူ့ပါးစပ်ထဲမထည့်ချင်ဘူးဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ဖီလင် အရမ်းမိုက်နေတာကြောင့် ဆွဲဖယ်လိုက်ဖို့တုန့်နှေးနေရပြန်ပါရော။
ဘယ်အချိန်ရပ်တန့်ရမယ်ဆိုတာ သူဘယ်လိုသိမှာလဲ။ အိုး….ဥက္ကာ ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့လက်ကိုအသာလွှတ်လိုက်ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့် ဦးခေါင်းထဲဝယ် ကြယ်တွေပေါ်လာသလိုပဲ။ အဆုံးသတ်ဖို့နီးကပ်လွန်း….အား အရမ်းကိုထိန်းချုပ်ထားတာ လွတ်ထွက်လို့နီးပါး။ ဥက္ကာက ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံကြားထဲ ခေါင်းဆိုက်နေရင်း ညောင်းလို့ထင့် ဘေးစောင်းလှဲပြီး ဆက်လုပ်တာဆိုတော့ သူ့ဆီးစပ်ကလည်း ကျွန်တော့် မျက်နှာနဲ့ခပ်နီးနီး မလှမ်းမကမ်းမှာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖောင်းဖုနေပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်လက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲယူလိုက်ပြီး သူ့ဂျင်းဘောင်းဘီက ဖုဖောင်းနေတဲ့အထုပ်အထည်ကြီးပေါ်ကို နေရာချထားပေးပါတယ်။ အင်း….ဒါ ကျွန်တော်က တစ်လှည့်ပြန်လုပ် ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အရိပ်အယောင်ကိုပြတာဖြစ်မယ်။ ကျွန်တော် သူ့ဘောင်းဘီဇစ်ကို အသာအောက်ကို ကျွန်တော်စတင်ဆွဲဖြုတ်လိုက် တယ်ပေ့ါ။
တဖြည်းဖြည်းလျောကျလာတဲ့ သူ့ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့အတူ ခပ်လှလှအတွင်းခံဘောင်းဘီတစ်ထည်က အထုပ်အထည်နဲ့ပေါ်လာပါတယ်။ တော်တော်ကြီးမားတဲ့ အကောက်အကွေ့ ကောက်ကြောင်းတစ်ခုက ကျွန်တော့်မျက်စိထဲထင်းကနဲပါပဲ။ ကိုယ့်မှာလည်းရှိပေမဲ့ အခြားလူရဲ့ ပစ္စည်းကို မမှိတ်မသုန်စိုက်ကြည့်မိတာ ပထမဆုံးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကွမ်းသီးခေါင်းနေရာက အနည်းငယ်သေးပြီး အောက်ပိုင်းက ဆင်အံငှက်ပျောသီးလို တုတ်ခိုင်ဆင်းသွားတာများ ခပ်ပါးပါး ချည်သားလေးကို ထွင်းဖောက်ထွက်လာမယ်ထင်ရပါရော။ ကျွန်တော် ဘောင်းဘီခါးမျော့ကြိုးဆီကိုလက်မရောက်သေးဘဲ ဖောင်းဖုနေတဲ့ ရွှေငှက်ပျောသီးကြီးကို တကယ့်ကိုငြင်ငြင်သာသာ ပွတ်သပ်မိပါတယ်။ လှလိုက်တာ။
ကျွန်တော်သိတယ် တကယ့်ကို ငြင်ငြင်သာသာနဲ့ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သူ့ကိုပြုစုပေးရမယ်ဆိုတာလေ။ ရလာတဲ့ အခိုက်အတန့်လေး ကို သူလည်းမမေ့သွားအောင် စွမ်းရမယ်မဟုတ်လား။ သူ့အတွင်းခံဘောင်းဘီခါးက သားရေမျှော့ကြိုးလေးကို အသာအောက်ကိုဆွဲချ လိုက်ပြီး အကျဉ်းကျနေတဲ့ အကျဉ်းသားကြီးကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ ရုတ်တရက် သူ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်ရှေ့ ၀ယ် ဘောင်းဘီကို အကုန်ချွတ်ပြရဲ့။ ရှည်လျားပြီး တုတ်ခိုင်လိုက်တာများ….အား။ သူ့ လိင်တံရဲ့အောက်မှာလည်း လုံးဝန်းလှပတဲ့ ရွှေဥ တွေက အလိုက်သင့်တွဲကျလို့။ ကျွန်တော် အဲတာလေးတွေကို အသာပွတ်သပ်ကြည့်မိတယ် လှပတဲ့ ပန်းသီးလေးတွေကို ကိုင်တွယ်ကြည့်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။ ခပ်ဖြည်းဖြည်းလည်း ဖျစ်ညှစ်ကြည့်မိတယ်။ သူ့ငပဲထိပ်ဝလေးက အရည်ကြည်လေးတွေ တလဲ့လဲ့ စိုရွှဲစပြုလာရော။
ကျွန်တော့်နှလုံးခုန်သံတွေဟာ မီးရထားစက်ခေါင်းတစ်လုံးလိုအရှိမြှင့်တက်လာတယ်။ ဒီလိုလှပတဲ့ အမျိုးသားအင်္ဂါပစ္စည်းတစ်ခုကို သူပိုင်ဆိုင်ထားတာ ကောင်းလိုက်တာ။ ကျွန်တော် ကွမ်းသီးခေါင်းအောက်ပိုင်းနားလောက် အသာဆုပ်ကိုင်လိုက်ကာ ခပ်ဖြေးဖြေး အထက်အောက် ကစားမိတယ်။ အစကတော့ နှေးနှေးပေါ့။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံလာတော့ ခပ်သွက်သွက်လေး လုပ်ပစ်လိုက်ရော။ ဘယ်လောက်ကြာအောင် ကျွန်တော် ကစားမိနေလည်းမသိဘူး ကျွန်တော့်လက်ထဲဝယ် သူ့ပစ္စည်းကြီး အစွမ်းကုန် မာတောင့်နေတာများ လန့်စရာပါ။
ကျွန်တော် ခဏတော့လွတ်သွားပုံရပါတယ်။ ဥက္ကာ ကျွန်တော့် ဦးခေါင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့အသာထိန်းကိုင်လိုက်ပြီး သူ့ပေါင်ခြံဆီ ဖိကပ် ပေးချိန်မှ ပြန်သတိကပ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ဆင့်တက်လှမ်းဖို့ သူ အရိပ်အမြွက်ပြပြန်ပြီ။ ကျွန်တော် ပါးစပ်ကို အသာဟကာ သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားထဲညှပ်ယူလိုက်ပါတယ်။ လက်အစုံနဲ့ သူ့တင်သားတွေကို ကိုင်တွယ်လိုက်တော့ ကျစ်လစ်နေတာ အား…စိတ် လှုပ်ရှားစရာကောင်းလိုက်တာ။ ပါးစပ်လေးအသာဟလိုက်တော့ ဥက္ကာ သူ့ငပဲကို ပါးစပ်ထဲအတင်းဖိသွင်းတယ်ဗျ။ ပြီးတော့ အလိုက်သင့် အထုတ်အသွင်းလုပ်တာ ဟော ဟောကနဲ လည်မျိုထဲရောက်တဲ့အထိ အဟွတ်။ ဘယ်လိုအနံ့မျိုးလည်းမသိ သူ့ဆီကရတဲ့ ကိုယ်နံ့ပြော မလား ဘာလဲမသိ စိတ်လှုပ်ရှားစဖွယ်လေး ရရှိနေရသလို နှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ထိနေရတဲ့ သူ့အရေပြားလေးကလည်း နုညံ့ပေစွ။ ကျွန်တော့် ဦးခေါင်းကို ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားပေးလိုက်ပြီး သူစိတ်ကျေနပ်စေဖို့ ကြိုးစားဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ မတင်မကျ ဖီလင် တစ်ခုကလည်း ဇာတ်ရှိန်မြင့်လာပါရဲ့။
အဲဒါတွေအကုန် ကျွန်တော့်မျက်နှာပြင်ဝယ် ပေါ်ကုန်ပြီလားမသိ ဥက္ကာက စိုက်ကြည့်ရင်းပြုံးပြကာ “ဟေး…မင်းလုပ်ပေးတာ အရမ်းကောင်းတယ်….သွားနဲ့မထိအောင်ပဲကြိုးစားပေးနော်….တစ်ခါတစ်ခါ သွား သွားထိတော့နာတယ်ကွ”တဲ့။
“Sorry” ကျွန်တော်လုပ်လက်စအလုပ်ပေါ်မှာပဲ အာရုံပြန်ကပ်လိုက်ပါတယ်။ အထက်အောက်….အပေါ်အောက် ခပ်သွက်သွက်လုပ်လိုက် မြန်လွန်းတယ်ထင်ရင် ပြန်နှေးလိုက်နဲ့ပေါ့။ ကျွန်တော်သိတယ် ကျွန်တော်လုပ်နေတာတွေက ဥက္ကာလုပ်ပေးတာလောက်ကောင်းမယ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလေ။ ဒါပေမဲ့ သူ့နှုတ်ဖျားက ခပ်ငြိမ့်ငြိမ့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ငြီးငြူသံလေးတွေကြောင့် အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက် လေးတွေဟာ ထိရောက်ကြောင်းပြဆိုနေတယ်ပေါ့။ ကျွန်တော့် ကွမ်းသီးခေါင်း အထိအခတ်မခံတဲ့ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို လျှာနဲ့ အ၀န်းအ၀ိုက်တွေလုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်သွားလေးနဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်ဝတစ်ဝိုက်ကိုတို့ခတ်မိတော့ အရသာသစ်တစ်ခု အတွက် ခဏတော့ ရပ်တန့်မိရော။ တွန့်ကနဲဖြစ်သွားတဲ့ သူ့တင်ပါးအစုံကိုကိုင်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်လက်ဖျားက အထိအတွေ့ကလည်း ကျွန်တော့်စိတ်တွေကို တဖျတ်ဖျတ်ဖြစ်စေပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ကွမ်းသီးခေါင်းတစ်ဝိုက်ကို lillopop ကို လျှာနဲ့ဝန်းဝိုက်ပြီး တပျွတ်ပျွတ်စုပ်သလို အားရပါးရစုပ်ပစ်လိုက်တယ် အဟီး။ အရမ်းမိုက်တယ်….သူ့ခြေဖျားလေးတွေ တွန့်ကွေးကုန်တယ်လေ။
ဥက္ကာရဲ့အသက်ရှူသံတွေဟာ ပိုပိုပြီး ဖားဖိုဆွဲလာတယ်။ ကျွန်တော့်လျှာနဲ့ထိကပ်နေသော သူ့ကြွက်သားချောင်းကြီးရဲ့ အပြောင်းအလဲ ကလည်း သိသာလာတယ်ပေါ့။ သူမကြာခင်ပြီးတော့မယ်ဆိုတာ အာရုံရလာပါတယ်။ ဥက္ကာသူ့လက်နဲ့ဖမ်းထိန်းထားတဲ့ ကျွန်တော့် ဦးခေါင်းကို သူ့ဆီပိုပိုတိုးကပ်စေအောင် ဖိဖိပေးရင်း ခါးတွေကို ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားပါရဲ့။ သိပ်မကြာတော့ဘူး ပြီးတော့မှာကို….သူ ပြီးတော့မယ် သုက်ရည်တွေ ပန်းထုတ်တော့မယ့်အကြောင်း ကျွန်တော့်ကိုပြောပြသင့်ပြီပေါ့။
ကျွန်တော်ပထမဆုံးအကြိမ် လက်သမားလုပ်တတ်စအချိန်တုန်းက သူများသုက်ရည်ရဲ့အရသာကိုခံစားရင်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း သုက်လွှတ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒကိုအကောင်အထည်ဖော်လိုက်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေ မဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာလဲ ငနဲတွေအဲ့လိုလုပ်တာပဲလေ ပါးစပ်ထဲ ငပဲကိုထည့်ထားရင်း လက်တစ်ဖက်က ကိုယ့်ဟာကိုကိုင်ပြီးကစားတာ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့စိတ်က ထူးဆန်းတယ် ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲတွေးမိ ခဲ့ပါသေးတယ်။ ညပေါင်းများစွာ အဲ့လိုစိတ်ကူးယဉ်ရင်း ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေကြား သုက်ရည်တွေ စီးဆင်းခဲ့ရတာပေါ့။ စီးကပ်ကပ် လက်ချောင်းတွေကို ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲထည့်ကာ ဘယ်လိုအရသာရှိလဲစမ်းသပ်ကြည့်ရုံလေး လုပ်ဆောင်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခိုင်းနိုင်ပေ မယ့် ကျွန်တော် ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
အာ…ကျွန်တော် သူ့ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်လိုက် အောက်ခြေပိုင်းကို လက်ခပ်သွက်သွက်ကစားပေးလိုက်လုပ်ပေးသလို အခြားလက်တစ်ဖက်ကလည်း ကိုယ့်ဟာကို play ပေါ့။ ဥက္ကာရဲ့ မိန့်မူးညည်းညူသံဟာ ပိုမိုကျယ်လောင်လာသလို သူ့အသက်ရှူသံတွေ ကလည်း မညီမညာဖြစ်လာပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ သူ့သုက်ရည် ပွက်ကနဲ တစ်ပွက်ကျလာတာကို သတိကပ်မိ လိုက်တယ်။ နောက်ပိုင်း ထပ်ထပ်ကျလာချိန်မှာတော့ သူ့ငပဲကို -ုပ်နေတာကို ရပ်ပြီး အသာငြိမ်ပေးထားလိုက်ရော။ သူ့သုက်ရည်တွေနဲ့ ကျွန်တော့် တံတွေးတွေရောယှက်နေပြီး ပါးစောင်ကနေတောင် မထိန်းနိုင်စွာစီးကျကုန်ပါတယ်။
“ဘယ်လိုနေလဲ ဘော်ဘော်” ဥက္ကာကအမေးစကားဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်တော့ သူ့ငပဲဟာ ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲမှာရှိနေဆဲ…အာ…..သူ့တင်ပါးတွေကို အသာခပ်တင်းတင်းဖျစ်ညှစ်လိုက်မိရင်း ကျွန်တော်သည်လည်း မြက်ခင်းပြင် ပေါ်ကို သုက်ရည်တွေ ဗျင်းကနဲ ဗျင်းကနဲ။
သူ့ငပဲဟာ ပျော့ပြောင်းတဲ့အခြေအနေဆီကို စတင်ချဉ်းကပ်နေပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့တွေ အ၀တ်တွေပြန်ဝတ်ဆင်ပြီး လူတွေ သတိမထားမိခင် ဒီနေရာကထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့ အချိန်ဖြစ်လာပြီပေါ့။ ကျွန်တော် မျက်နှာကို အောက်ငိုက်ဆိုက်ချလိုက်မိတယ် ရှက်လို့ တော့မဟုတ်ဘူးနော်။ အခုပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ အထိအတွေ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ရပ်တစ်ခုက အဆုံးသပ်ပြီဆိုတာသိရတော့ နောက်တစ်ခါဆိုတဲ့ ကိစ္စ စိတ်ထဲဝင်လာလို့ပါနော်။ ပထမဆုံးအကြိမ်ပါပဲ မိမိမဟုတ်တဲ့ အခြားသော ယောက်ျားသားတစ်ယောက် အဲအချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း လေးဟာ စိတ်ကော ကိုယ်ကော အရာရာ ရင်းနှီးနီးကပ်သွားသယောင် စိတ်ထဲခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော် ကျွန်တော် ဥက္ကာကို အရံသင့်အဆင်သင့် ချစ်မိသွားပြီထင် ပါရဲ့လေ။ အဲ နေမစောင်းခင် ကျွန်တော်တို့ ဒီသစ်တောအုပ်ထဲကထွက်ခွာကြမယ်။
ဥက္ကာတစ်ယောက် အာရုံတွေများရနေသလားမသိ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို လက်လေးနဲ့အသာကိုင် အားရပါးရပြုံးလိုက်ကာ “ငါတို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မကြာခဏတွေ့ဖို့ကြိုးစားကြမယ်နော်…ဟုတ်လား?” လို့ပြောပါတယ်။
ဟုတ်လား? ကျွန်တော့်ဘက်ကတော့ အသေအချာပါပဲ။ မင်း…မင်းကို နောက်တစ်ခါ ငါ့ကို မခွဲသွားရဘူးနော်။ ကျွန်တော် အ၀တ်မဲ့တဲ့ သူ့ကိုယ်လုံးကြီးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် အားရပါးရဖက်တွယ်လိုက်ပါတယ် နောက်တစ်ကြိမ်မတွေ့ရတော့မယ့်လူတစ်ယောက်ကို ဖက်သလိုပေါ့ မလွှတ်နိုင် မခွဲခွာနိုင်ဘူး။
“အေး…ငါတို့ သေချာပေါက်ထပ်တွေ့ကြတာပေါ့” နောက်ဆုံးစကားလုံးတွေကို အဆုံးသပ်လိုက်ကြပါတယ်။ ဥက္ကာ ကျွန်တော့်ကို ငြင်ငြင် သာသာ တစ်ချက်ပြန်ထွေးဖက်လိုက်ပြီးနောက် နှစ်ယောက်သား အ၀တ်တွေအသေအချာပြန်ဝတ်ကြပါတယ် ခင်ဗျ။ မိနစ်အနည်းငယ် လောက် လမ်းကြောင်းအတိုင်း စက်ဘီးပြန်စီးလာကြပြီးနောက် ယာဉ်ရပ်နားစခန်းလည်းရောက်ရော ကိုယ်စီ ကိုယ့်စက်ဘီးကိုယ့်ကားပေါ် တင်လိုက်ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးအကြိမ် အပြန်အလှန်ထွေးဖက်ကာ ခဏငြိမ်သက်လိုက်ပြီးနောက် ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် ကားမောင်းထွက်ခွာ ဖြစ်ကြပါရော။
တကယ့်ကို ပြည့်စုံလွန်းတဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါပဲ။ ပြီးတော့ လိင်တူခြင်းချစ်ခင်နှစ်သက်သူ ဂေးတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူမိစေသော နေ့တစ်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။
“I am proud to beagay”
Alex Aung (28 Dec 2014)
Note: နောက်လအလယ်လောက်မှ ရန်ကုန်ပြန်လာဖြစ်ပါ့မယ်....နှစ်သစ်မှာ ဘေးရန်ကင်းကွာလို့ အနာရောဂါကင်းရှင်းကြပါစေကြောင်း..
Posted by Alex Aung at 12:54 PM No comments: